Ihe ọhụrụ Macbook Pro nwere ike ọ gaghị achọ karịa 16 Gb | Esi m mac
Ihe ngosi Macbook ohuru nwere ike ọ gaghị achọ karịa 16 Gb
Ọtụtụ ekwuwo na arụmụka ahụ na-aga n'ihu banyere nhazi nke ọhụrụ Macbook Pro 2106 nke e gosipụtara na isi okwu ikpeazụ. N'ezie Ọ naghị emepụta foto dị mma maka Apple na Phil Schiller na-aga ọkara ụwa na-enye nkọwa gbasara atụmatụ ahụ nke Macbook Pro ohuru.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga-ekweta na ha adịkarịghị ezighi ezi na nhazi ha na ihe ndị mere eji hazie ya otu ahụ. Anyi aghaghi iburu n’uche na Apple na-anwa imeputa akụrụngwa a na - emegharị maka otutu ndi mmadu na nke di mgbagwoju anya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mkpa onye ọrụ nke zụrụ Macbook Pro ekwesịghị ịdị na nke ọzọ.
Isi ihe kpatara na ịghara ịchekwa ebe nchekwa RAM dabere na njiri kọmputa gị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka awa iri kwụụrụ onwe anyị, anyị enweghị ike ịfefe ọnụ ọgụgụ a. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọzọ na ebe nchekwa pụtara na-eme ngwá ọzọ dị oké ọnụ Na n'echiche a, onye ọrụ Apple egosipụtalarị onwe ya na-egosi na ọnụahịa nke mbụ Macbook Pro na-enweghị Touch Bar yiri ka ọ dị elu na 1.449 XNUMX
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-atụle na ngwaọrụ ndị a ka bụ Pro, n'agbanyeghị na ha enweghị karịa 16 Gb. Ihe kpatara ya na ntọala kọmputa nke kọmputa- Mgbe Mac na-erepịa RAM niile dị, ọ na-eji gbanwee ohere. Onye na amaghi okwu a, kwuo ya A na-echekwa ozi ị na-enweghị ike ịchekwa na RAM na draịvụ ike. Yabụ, ịnwe draịvụ draịvụ nwayọ nwayọ ma ọ bụ SSD na - eme ka ịchọta ozi dị ogologo. Otú ọ dị, ọhụrụ Macbook Pro nwere ebe nchekwa SSD kachasị ọsọ na ahịa, nwere ike ịgụ faịlụ ruo 2 Gb / abụọ ya mere, a na-arụ ọrụ a n'otu ntabi anya.
Otu ihe atụ dị mfe: ọ bụrụ na Mac m nwere 8 GB nke RAM ma ana m agagharị faịlụ nke dị 2 GB karịa RAM dị n'oge ahụ, Macbook Pro ọhụrụ nwere ike ịdekọ ma gụọ ozi ahụ n'otu sekọnd.
Yabụ mgbe anyị zụtara Mac, n'ezie anyị na-azụta ọ bụghị naanị kọmputa, kama ọ bụ otu n'ime akụrụngwa kachasị arụ ọrụ nke dị n'ahịa, enwe ike iru ihe kachasị na iji ihe onwunwe kacha nta na n'ihi ọtụtụ ihe anyị kwesịrị inwe ekele.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe ngosi Macbook ohuru nwere ike ọ gaghị achọ karịa 16 Gb
! 6 GB dị ka nhazi kachasị na kọmpụta ọkachamara na gburugburu € 3.000 bụ nhọrọ na-adịghị mma, ọ dị mma maka ndị ọrụ nkịtị na-eji ọfịs ọrụ / igodo ọfịs, mana ọ bụghị maka ndị ọrụ chọrọ karịa, ma ọ bụrụ na 16Gb ezuola Ya mere, gịnị kpatara ha ji nye 64 GB na Mac Pro maka afọ 3.
Otu ihe bụ na 16 GB nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na ụfọdụ na nke ọzọ na enweghị ike ịtinyekwu.
N'aka nke ọzọ, njikwa ebe nchekwa nke OSX dị ezigbo mma, ma ị bụ eziokwu na na diski ahụ, paging ga-adị ngwa ngwa, mana ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla dịka ị na-ekwu, ọ bụ OS na-ekpebi peeji ndị aga diski. na nke na-adịghị, na-arụ ọrụ nke ọtụtụ usoro nhazi, dị ka oge igbu, mmezu ikpeazụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-agụ, onye ọrụ ma ọ bụ usoro usoro, wdg ... nha nke peeji ebe nchekwa adịghị oke dị ka 2 GB, njikwa na ọgụgụ ha / ide ihe kariri nke abuo.
"Arụmọrụ, ebuli akụ" M ka na-echeta mgbe m nwere 4 gb nke ebule na usoro riri niile na ebe nchekwa na ihe anọ na ọ meghere, ihe niile malitere ịgbanwe mgbe m gbasaa ebe nchekwa 8 gb na a 2009 macbook pro. Mkpa oke nchekwa ahụ, ọ bụrụ na ha enweghị ike ịnwe ya, kedu oke agụụ mmekọ ndị a sitere na Apple !!!
Zaghachi psyche3000 ...
Apple na-atụ anya nnukwu ahịa nke MacBook Pro na 2017
Esi edozi ibe weebụ dị ka akwụkwọ ahụaja na Mac anyị